China Polycrystalline Solar Panels, Polycrystalline Solar PV Panels, Polycrystalline Solar Photovoltaic Panel Mutengesi uye Mutengesi
Tsanangudzo:Polycrystalline Solar Panels,Polycrystalline Solar PV Panels,Polycrystalline Solar Photovoltaic Panel,Polycrystalline Photovoltaic Solar Panels,,
Home > Products > Solar Module &amp; Panel > Polycrystalline Solar Panels
Zvigadzirwa zve Polycrystalline Solar Panels , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Polycrystalline Solar Panels , Polycrystalline Solar PV Panels vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Polycrystalline Solar Photovoltaic Panel R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
China Polycrystalline Solar Panels Vatengi
Polycrystalline solar panels inoumbwa nepolycrystalline silicon masero ezuva, mafirimu eVA epasi yakafukidzwa girazi, chiedza che electroplating rate yegoridhe. Polycrystalline silicon inenge yakawanda ine nhamba yakawanda yekristal imwe nhatu. Kazhinji, Polycrystalline solar panels ine unyanzvi hwema18 muzana. Simba rinokonzerwa nepolycrystalline solar panels rinonyatsochengetedzwa pa + / - - 3% kuitira kuti zvirwere zvive zvakanaka kune imwe neimwe. Zvikamu zvaro zvinoshandiswa nema laboratori anozivikanwa munyika dzakawanda kuti ave nechokwadi chekuita kwezvinhu zvinowanikwa zvakaenzana. Muchigadzirwa chekugadzirwa kwezvikamu, shanduro yepamusoro isina shisa yakavakwa mukona huru yekubatanidza inoshandiswa kuti isimbise chisimbiso, ine simba remagetsi uye kushanduka kwepamusoro, girasi rakazara girasi uye rakasimbiswa mvura isina kusimba bhokisi rinogamuchirwa kuti rive nechokwadi chekuchengetedza kwezvinhu. Izvo zvinokonzera simba zveyi pv modules zvinotsigirwa kuti zvinopfuura 90% mukati memakore gumi ekushandiswa. Mumakore makumi maviri nemashanu ekushandiswa, simba rinobuda rinopfuura 80%. Mafomu ekuputira uye zvishandiso zvakadai semakonji emabhokisi akasarudzwa nepolycrystalline mashizha ezuva anogadzirisa zvinodiwa zvekushandisa mumunda uye nhamba yekuchengetedza inosvika IP65. Muchina wacho unogona kukurira mhepo ine simba ye 120Km / h, uye simba racho rinogona kudzivisa mhepo yakawanda yejecha, chimvuramabwe nechando mhepo.